Riek Macharka Macaaradka Koonfurta Suudaan oo Dalka Suudaan lagu soo dhaweeye – Xeernews24
Riek Macharka Macaaradka Koonfurta Suudaan oo Dalka Suudaan lagu soo dhaweeye
Hogaamiyaha mucaaradka Koonfurta Suudaan Riek Machar ayaa gaadhay Magaalada Khartoum si loogu soo daweeyo caafimaadkiisa, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Suudaan, maalmo ka dib markii uu u cararay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ka dib dagaallo lagu hoobtay ee bishii hore.
Wasiirka Warfaafinta Suudaan Axmed Bilal Cusmaan ayaa sheegay in Suudaan ay u aqbashay, Dr Riek Machar, sababo bini’aadanimo, gaar ahaan baahidiisa si loo daweeyo iyo daryeelka caafimaadkiisa,“ Cusmaan ayaa u sheegay warbaahinta dalkaas in caafimaadka Dr Riek Machar yahay mid deggan hadda isago sii joogi doono dalka lana siin doono daryeel caafimaad dhamaystiran ilaa uu ka bogsoodo, oo go’aansado halka uu doonayo in uu aado.
Boqolaal ayaa ku dhintay bishii la soo dhaafay – halka tobanaan kun ay ku barakaceen – markii ay isku dhaceen ciidamada daacada u ah Machar iyo ciidamada dowladda madaxweyne Salva Kiir ee caasimadda Koonfurta Suudaan ee, Juba.
Ka dib dagaalka kulul, Machar iyo ciidamadiisa ayaa u baxsaday dhanka duurka iyado markii dambe lagu bedelay xilkiisa Madaxweyne ku xigeenka xisbiga kaso horjeeda ee ninka lagu magacaabo Taban Deng Gai.
Hadalka Suudaan ay ku dhawaaqday ee Machar joogitaankiisa caasimada Suudaan talaadadi ayaa kusoo aaday maalin uun ka dib markii Deng booqashadiisa koowaad ee rasmi ah ku tagay Khartoum dadka ka faalooda Siyaasada dalka Koonfurta Suudaan ayaa u arka tagiska u tagay Riek Machar dalka Suudaan ay tahay in ay Koonfurta Suudaan hada uun ligaha si fiican ula gashay dagaal daba dheeraadda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/Suudaan.jpg 189 267 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-08-25 20:26:072016-08-25 20:26:07Riek Macharka Macaaradka Koonfurta Suudaan oo Dalka Suudaan lagu soo dhaweeye
Hurdoow Djibouti waa taa maanta Sittiyeey maxaad u weyday Waxaad Mudnayd?